FARITRA ANDROY : fitsidihana sy fijerena ifotony ny LTP Ambovombe. – METFP
« Mikatsaka izay fomba hoenti-mampandroso ny ivontoeram-panofanana, indrindra fa ny ety amin’ny faritra ny tenako » , hoy Ramatoa VAVITSARA Rahantanirina Gabriella. Nitondra fampitaovana ho an’ireo mpiofana hainahandro sy ny tao-trano noho izany izy, nandritra ny fitsidihana sy fijerena ifotony ny LTP Ambovombe.
Mpianatra maherin’ny enimpolo (60) no mandrato fahalalana amin’ity ivontoeram-panofanana ity, ary hita fa efa antitra ny efitrano fianarana sasany. Nifandinika tamin’ireo tompon’andraikitra noho izany Ramatoa Minisitra mba hafahana manatsara, ary mamatsy jiro sy rano ao an-toerana.
Hoenti-mandrisika ireo mpiofana ihany koa dia nampanatena ny tenany fa hikarakara manokana ireo mendrika, hafahan’izy ireo manao fitsidihana amin’ny orinasa lehibe, sy mahita ny fivoaran’ny tontolon’ny asa.
Taorian’ny fitsidihana dia nanolotra mari-panofanana ho an’ny tanora, reny ary raim-pianakaviana miisa efajato (400) Ramatoa Minisitra. Fiofanana izay nosafidiana araka ny filan’ny faritra, toy ny informatika, ny fikarakarana sy fanadiovana hefitrano fandraisam-bahiny, ny hainahandro, ny « Développement personnel ».
©️ SCOM METFP/ Mai 2022